Sleep – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပျော်စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၄ မျိုး
၊ ကိုထက် ၊ နေ့စဉ် အိပ်ချိန်လုံလောက်အောင်ပေးပေမယ့်လည်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မပျော်တဲ့အခါမှာ အိပ်ရေးမ၀တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမ၀တဲ့အခါ အလုပ်ထဲအာရုံမစိုက်နိုင်တာ၊ ပေါ့ပါးဖျတ်လတ်မှုမရှိတာ . . စတာတွေအပြင် တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းရတဲ့ အချိန်တွေက အလွန်ပင်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လွယ်စေနိုင်သလို တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာနေပြီး ခန္ဓာကိုယ်သန်စွမ်းမှုကိုလည်း ကျဆင်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) – ကိုယ်အလေးချိန်များနေလျှင်ထိန်းပါ BMI ၃၀ထက်မြင့်သူတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်များတာကြောင့် အိပ်ပျော်နေစဉ် ခေတ္တအသက်ရှူရပ်တဲ့ Sleep Apnea အဖြစ်များပါတယ်။ အ၀လွန်တာက အသက်ရှူတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၅-၁၀ပေါင်များတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပြီးချိန်မှာ အိပ်စက်မှုအလေ့အထ ပိုမိုကောင်းမွန်တာကို...
ကလေးခေါင်းတစ်ဖက်တည်း စောင်းအိပ်နေလို့ . . .
မေး. မင်္ဂလာပါရှင်။ ကလေးခေါင်းတစ်ဖက်တည်း စောင်းအိပ်နေရင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲရှင်။ Youn Youn (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကလေးငယ်တွေဟာ အလင်းရောင်ရှိတဲ့ဘက် ဥပမာ- ပြတင်းပေါက်၊ မီးချောင်း စတဲ့ဘက်ကို စောင်းကြည့်တတ်ပါတယ်။ နေရာရွေ့ကြည့်ပါ။ မထူးခြားရင် Torticollis လို့ခေါ်တဲ့...
နေ့လယ်စာစားပြီး တစ်ရေးအိပ်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကောင်းစေ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်သက်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ သုတေသီတွေက အသက် ၆၅ နှစ်ကျော် လူ ၃၀၀၀ကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရာ နေ့လယ်မှာ တစ်နာရီကြာအိပ်စက်လေ့ရှိသူတွေဟာ သင်္ချာပုစ္ဆာတွေဖြေရှင်းတာ၊ ပထ၀ီပုံတွေဆွဲတာနဲ့ စကားလုံးတွေမှတ်မိတာတို့မှာ ပိုမိုထူးချွန်ကြကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နေ့ခင်းတစ်ရေးအိပ်လေ့မရှိသူတွေက စမ်းသပ်မှုတွေမှာ ရလဒ်ဆိုးရွားတာကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။...
အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် သိပ္ပံနည်းကျ ဖြေရှင်းနည်းများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကောင်းကောင်း အိပ်မောကျဖို့နဲ့ အိပ်စက်မှုဝေဒနာတွေ ကင်းဝေးဖို့အတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – အိပ်ရင်း ဟောက်တတ်လျှင် ဘေးတစ်စောင်းအိပ်ပါ၊ လက်တွေကို ခေါင်းအောက်ထားပြီး ဘေးစောင်းအိပ်ပါ။ မအိပ်ခင် နှာခေါင်းထဲကို ဆားရည်ပက်ဖျန်းပေးပါ။ အရက်မသောက်ပါနဲ့။ –...
အဖြစ်များသည့် အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အိပ်စက်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အချက်တွေရှိရင် ပြောပြပေးပါဆရာ။ ဖြေ. အိပ်စက်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ အချက်တွေကတော့- – အလင်းရောင် အလင်းရောင်ထိတွေ့မှုကြောင့် အိပ်မောကျနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ – ဆူညံသံ ကားသံ၊ တီဗီအသံ၊ တေးသီချင်းအသံ၊...
ဘယ်လောက်အိပ်ရင် လုံလောက်သလဲ . . .
မေး။ ။ လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်အိပ်ရင် လုံလောက်ပါသလဲ ဆရာ။ ညဘက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျစေဖို့ ဘယ်လိုအလေ့အထတွေထားရှိသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဦးတင်စန်း၊ လှိုင်သာယာ။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အများစုဟာ တစ်ည...
သဘာဝအိပ်ဆေး သုံးစွဲလို့ရနိုင်သလား . . .
မေး. ကျွန်တော်က အသက်ကြီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ညနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်အောင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ သဘာဝအိပ်ဆေးတစ်မျိုးကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲချင်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲလို့ရပါသလား။ အဲဒီဆေးကိုသုံးစွဲတာကြောင့် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရရှိပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သဘာဝကပဲထုတ်ထုတ်၊ ဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ပဲထုတ်ထုတ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဆေးသောက်လိုက်ရင်...
ည ည ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘူးလား
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူအများစုက တစ်ညမှာ ၅-၉နာရီ ခန့် အိပ်စက်ချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမ၀တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့ကျစေပြီး စိတ်ပင်ပန်းတာနဲ့ လူပင်ပန်းတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်တာက စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပူပင်သောကများတာ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့ စိတ်ကျန်း...
အိပ်ချိန်နည်းရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ . . .
မေး. ကျွန်တော့်အသက် ၃၀ပါ။ တစ်ညကို အိပ်ချိန် လေး-ငါးနာရီပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါ ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်ပါသလဲ သိချင်လို့ပါ ခင်ဗျ။ ကိုတိုး၊ လှိုင်သာယာ။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အိပ်ချိန်လိုအပ်ချက် မတူပါ။ ကလေးငယ်တွေ၊ ကာယလုပ်သားတွေ၊...